ရွှေအိုးထမ်းလာတဲ့သား Part II | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ရွှေအိုးထမ်းလာတဲ့သား Part II
ရွှေအိုးထမ်းလာတဲ့သား Part II
Posted by မောင် ပေ on Jul 21, 2011 in Creative Writing, Drama, Essays.. |9comments
လင်းလင်း တစ်ယောက် မမ နှင့် သမီးရည်းစား ဖြစ်သွားကြသည် ။ ထိုနောက်ပိုင်း ရန်ကုန်သို့ ရောက်တိုင်း လင်းလင်း ၏ အထိန်းတော် ဒရိုက်ဘာ ကိုထွန်းမှာ ကားတာဝန် အားလုံး သူ တစ်ယောက်ထဲ ၏ တာဝန် ။ လင်းလင်း က တော့ မမ နှင့် သာ လည်ပတ် ပျော်ပါးနေခဲ့သည် ။ အလုပ် မှ ခွင့်ယူရက် များလာသော မမ ကို သူမ ၏ ဘော့စ် မှ သတိထားမိလာသည် ။ အမှန်အတိုင်း မှာ မမ မှာ စက္ကတ္ထရီ ဟု နာမည် တပ်ထားသော်လည်း သူမ ၏ အဓိက တာဝန် မှာ ဘော့စ် အား အနီးကပ် ပြုစု စောင့်ရှောက်ရခြင်း ဖြစ်သည် ။ အမြဲတမ်းတော့ မဟုတ် ။ ဘော့စ် အလိုရှိသည့် အခါ မျိုးတွင် မှ ဖြစ်သည် ။ မမ သည် ကစ်ပင်း တစ်ယောက်ဖြစ်သည် ။ ယခင် က တော့ မမ အနေဖြင့် ဘော့စ် အား အတော် တွယ်ကပ် ခဲ့သော်လည်း ဘော့စ် ၏ မယားကြီး က ကုမ္ပဏီ သို့ မကြာခဏ လိုက်လာချိန်မှ စ ၍ ဘော့စ် အား မမ ရှောင်ဖယ် ရှောင်ဖယ် လုပ်ခဲ့သည် ။ ယခု မူ ဘော့စ် က မမ ကို အလိုရှိနေသည် ။ ဘော့စ် အလိုရှိနေချိန်တွင် မမ က မရှိ ။ လင်းလင်း နှင့် အတူ ပျော်ပါးနေသည် ။ မမ ခွင့်ယူ သည့် အကြောင်း ကို စုံစမ်းသော အခါ မန်းတလေး မှ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် မိတ်ဆွေ လေး ၏ သား နှင့် ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်နေသည် ကို ဘော့စ် သိရှိသွားရာမှ မျက်လုံးပြူးသွားတော့သည် ။ ဘော့စ် တစ်ယောက် မမ ဆီ သို့ ဖုန်းဆက် ကာ တွေ့ ဖို့ ချိန်းသောအခါ မမ တစ်ယောက် အကြောင်းအမျိုးမျိုး ပြကာ ရှောင်တော့သည် ။ တစ်ရက် ရုံးခန်းတွင်း တွင်တော့ ရှောင်၍ မရတော့ ။
` မမ…ကိုကြီး ကို ဘာလို့ ရှောင်နေတာလဲ ´
ဘော့စ် က မမ မေးစေ့ လေး ကို ကိုင်ပြီး မေးလိုက်သည် ။ မမ က ရွံ သလိုလို အမူအယာ ပြကာ နောက်ဆုတ်ရင်း ဖြေသည် ။
` ဘော့စ် ကို မရှောင်ရဲ ပါဘူး ဘော့စ် ရယ် ၊ နယ်က အမျိုးတွေ ရောက်နေလို့ အလည် လိုက်ပို့ ပေးနေရလို့ ပါ ´
` မင်း ပြောတဲ့ နယ်က အမျိုးတွေ ဆိုတာ မန်းတလေး က ဦးလင်းဆွေ ရဲ့ သား လင်းလင်း လား ´
မမ တစ်ယောက် ဒေါသ အရမ်းထွက်သွားပြီး တစ်ဆတ်ဆတ် တုန်လာသည် ။
` ဒီမှာ ကိုကြီး ၊ ကိုကြီး သိနေပြီးသား ဆိုရင်လည်း ကိုကြီး ခေါင်းထဲ မှာပဲ ထားပါ ၊ ကျွန်မ ကိုကြီး ကို အကောင်းဆုံး ပေးဆပ် ခဲ့တာတွေ ကို မျက်နှာထောက်ပြီး ၊ ကျွန်မ တို့ ကိစ္စ ကို မေ့ပစ်ပေးပါ လို့တောင်းပန်ပါရစေ ´
` ဒီလို လုပ် လို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ မမ ရာ ၊ ဦးလင်းဆွေ ဆိုတာ ကိုကြီး နဲ့ စီးပွားလုပ်ဖော် ကိုင်ဖက် ဆိုရင်လည်း ဟုတ်တယ် ၊ မိတ်ဆွေ ကောင်း တစ်ဦး ဆိုရင်လည်း ဟုတ်တယ် ၊ ဒီတော့ လင်းလင်း ဆိုတာ ကိုကြီး တူလို့ ပြောလို့ ရတယ် ။ တက်လမ်းတွေ အများကြီး ရှိတဲ့ ကိုယ့်တူ တစ်ယောက် …၊ မမ နဲ့ ဒီလို ဖြစ်တာ ကို တော့ ကိုကြီး သဘောမတူ တာ အမှန်ပဲ ။ နောက်ပြီး မမ နဲ့ကိုကြီး ထပ်တွေ့ ချင်သေးတယ် ၊ ကိုကြီး နဲ့ ငြိပြီးတဲ့ နောက် တစ်ခြား ကောင်လေး တွေ တစ်ခြား ဘဲကြီး တွေ နဲ့ မမ ရှုပ်ခဲ့တာ ကို ၊ ကိုကြီး မသိချင်ဟန်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ် ၊ အခု လင်းလင်း ကိစ္စ ကိုတော့ ကိုကြီး သဘောမတူ နိုင်ဘူး ၊ ခွင့် မပြု နိုင်ဘူး ။ဒီတော့ ဒီကလေး ကို လွှတ်လိုက်ပါ မမ ရာ ၊ မမ လိုချင်တာ မှန်သမျှ တောင်းဆိုခဲ့သမျှ ကို လည်း ကိုကြီး ပေးခဲ့တာပဲ မလား ´
` ဒီမှာ…၊ ကိုကြီး….. ။ ကိုကြီး က ကျွန်မ ဘ၀ အတွက် အမှီသဟဲ တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့တာ မှန်ပါတယ် ။ ဒီအတွက် ကျွန်မ ဘက် က လည်း ကျွန်မ ဘ၀ ကို ရင်းနှီးခဲ့တာပဲလေ ။ အခု လင်းလင်း က တော့ ကျွန်မ ဘ၀ အတွက် တစ်စုံတစ်ရာ ကို ပြောင်းလဲ နိုင်စွမ်း ရှိတဲ့ သူ တစ်ယောက် မို့ ကျွန်မ့ဘက်က လုံးဝ နောက်ဆုတ်မှာ မဟုတ်ဘူး ။ ကိုကြီး နဲ့ထပ်တွေ့ ဖို့ ဆိုတာက…… မေ့လိုက်ပါတော့ ကိုကြီး ရယ် ၊ ကျွန်မ တို့ ဇါတ်လမ်းက ပြီးပါပြီ ၊ ဒီလကုန် ရင် ကျွန်မ အလုပ်ထွက်မယ် ။ ဟုတ်ပြီလား ´
` လွယ်လှချီလား မမ ရဲ့ ၊ မင်းကောင်လေး က သေချာပြီပေါ့လေ ၊ ဟုတ်လား ။ ကိုကြီး က မင်း ကို ဒီလို လွယ်လွယ် နဲ့လက်လွှတ်ခံ မယ် လို့ မင်း ထင်နေလို့ လား ´
` ကိုကြီး ကို ကျွန်မ တောင်းပန်ပါတယ် ။ ကျွန်မ နောက်ကြောင်း ရှုပ်ခဲ့တယ်ဆို တာ မှန်ပေမယ့် ၊ ဒီကောင်လေး နဲ့ဘ၀ အသစ် ထူထောင်ချင်တာ ကို ကိုကြီး နားလည် ပေးပါ လို့ တောင်းပန် ပါရစေ နော် ´
` မရဘူး မမ ၊ အေး…. မင်းကို နောက်ဆုံး အနေ နဲ့စကားကုန် ပြောလိုက်မယ် ၊ လင်းလင်း ရဲ့ အဖေ အမေ သာ ဒီအကြောင်း ကို သိသွားမယ် ဆိုရင် မင်းလို မိန်းမ မျိုး နဲ့၊ သူတို့ လည်း လုံးဝ သဘောတူ မှာ မဟုတ်ဘူး ၊ ကိုကြီး က လည်း မင်း လို ကစ်ပင်မျိုးကို လက်လွှတ် မခံ နိုင်ဘူး ။ နောက်ပြီး လင်းလင်း ဆိုတာ ကိုယ့်တူလို မျိုး မို့ ၊ မင်း လို မိန်းမ မျိုးနဲ့ မဖြစ်အောင် လို့ ကိုကြီး တို့ က စောင့်ရှောက်ရမယ့် ၀တ္တရား ရှိတယ် ။ ဒီတော့ မင်း အနေ နဲ့ ဘယ်လို မှ ဖြစ်မလာနိုင်တဲ့ ဇါတ်ကို ဆက်မက ပါနဲ့၊ အရင်လို ကိုကြီး ရဲ့ ထောက်ပံ့ပေးပိုးအောက်မှာပဲ အေးအေးဆေးဆေး ဆက်နေ ပါ ၊ မင်းကို ကိုကြီး အရင်ကထက် ထပ်တိုး စောင့်ရှောက်ပေးမယ် လို့ ကိုကြီး ဘက်က ကတိပေးပါတယ် ။ ဟုတ်ပြီလား ´
` ကောင်းပြီလေ…… မမ ဆိုတဲ့ ကျွန်မ ဟာ လည်း ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာ ကိုယ်လိုချင်တာ ကို ဘယ်လောက် ခက်ခဲ ပါစေ ၊ ရအောင် ယူ ပြမယ် ။ ကိုကြီး ဆက်ကြည့်နေလိုက်ပါ ၊ ကိုကြီး ဆီ က နေ အခု ပဲ ကျွန်မ အလုပ်ထွက်တယ် ဆိုတာ ပြောခဲ့မယ် ၊ ကျွန်မ သွားပြီ ´
` ဟားဟားဟားဟား……. မမ ရေ ၊ ကြည့်ကြသေးတာပေါ့ ကွာ ´
မမ တစ်ယောက် ဘော့စ် ( ဦးကိုကို ) ၏ အလုပ် ရုံးခန်း မှ ဒေါသတကြီး ဖြင့် ထွက်လာပြီး ၊ တိုက်ခန်း သို့ ပြန်ကာ အ၀တ်အစား များ အကုန်သိမ်းဆည်းတော့သည် ။ ကားဂိတ်သို့ မန်းတလေး ကားလက်မှတ် တစ်စောင် ဖုန်းဆက် မှာလိုက်ပြီး မန်းတလေး သို့ သွားရန် ပြင်ဆင်တော့သည် ။ လင်းလင်း ဆီ ဖုန်းဆက်လိုက်သည် ။
` ဟယ်လို…… မောင် လား ဟင် ´
` ဟယ်လို….. ပြော မမ….. ဟင် ၊ မမ ငိုနေတာလား ၊ ဘာဖြစ်တာလဲ ပြော…ပြောစမ်းပါဗျာ ´
` အဟင့်……. ဒီညနေ ကား နဲ့မမ မန်းတလေး ကို လာခဲ့မယ် ၊ မမ အလုပ် က ထွက်လိုက်ပြီ ၊ မန်းတလေး ရောက်မှ အကြောင်းစုံ ပြောပြတော့မယ် ၊ မနက်ဖန် မနက် မမ ကို မောင်လေး လာကြိုပေး နော် ´
` ကောင်းပြီလေ….မနက်ကားမဆိုက်ခင် ၁၀ မိနစ်လောက် ကြို ပြီး ကားကြီးကွင်း မှာ မောင်စောင့်နေမယ် ၊ မမ လမ်းမှာ ဂရုစိုက်ဦးနော် ၊ မငိုနဲ့ တော့နော် ´
` အင်းပါ… ။ ဒါနဲ့ မောင့် ဆီ ကို တစ်ယောက်ယောက် က များ မမ အကြောင်း ဖုန်းဆက် ပြောလာရင် မယုံလိုက်ပါနဲ့ လို့ မမ မှာထားပါရစေနော် ´
` ဘယ်လို ဘယ်လို…. မမ က ဘာ ဖြစ် လို့၊ ဘယ်သူ က မောင့် ဆီ ဖုန်းဆက် ပြောလာမှာလဲ…. မောင် နားမလည် ဘူးကော ´
` ကဲပါ….မောင့် ကို မမ ပြောသလို သာ မောင် လုပ် ပါ ၊ မနက် မောင် နဲ့ တွေ့ မှ အကြောင်းစုံ မမ ပြောပြတော့မယ် ၊ အခု မမ အရမ်းဝမ်းနည်းနေလို့ စကားအများကြီး မပြောချင် ဘူး ၊ မနက်ဖန် မနက် မန်းတလေး မှာ ဆုံမယ် နော် မောင် ၊ ဒါပဲကွာ ၊ ဘိုင့်ဘိုင် ´
` မမ…မမမ….´ ဖုန်းက ကျသွားခဲ့ပြီ ။ လင်းလင်း တစ်ယောက် ဘာမှကို မသိပဲ မမ တစ်ယောက် ငိုပြီးဖုန်းဆက်လာတကို ကြားလိုက်ရပြီးနောက် ပြာယာ ခတ်သွားခဲ့သည် ။ ` အင်း.. မမ ဘာတွေ ကွိုင်တက် နေပြီလဲ မသိဘူး ၊ အေးပေါ့လေ..သူ ပြောသလို မနက်ဖန် မနက် ကြ အကြောင်းစုံ သိရမှ ပဲ ဘာလုပ်သင့်သလဲ ဆိုတာ ကို ဆက်စဉ်းစားရမှာပဲ …ဟူးးး ´
မမ နှင့် လင်းလင်း တို့ ဖုန်းပြောနေချိန် တွင် ရန်ကုန် မှ ဦးကိုကို က လည်း လင်းလင်းအဖေ ဦးလင်းဆွေ ဆီ ဖုန်းဆက် လာသည် ။ လင်းလင်း နှင့် မမ တို့ ၏ ဇါတ်လမ်းအကြောင်းများ နှင့် မမ ၏ ဇါတ်ကြောင်း များ ကို ပါ ပြောခဲ့သည် ။ ဦးလင်းဆွေ လည်း ဖုန်းဆက်အပြီး ဒေါသ အရမ်းဖြစ်သွားသည် ။ သို့ သော် ဦးလင်းဆွေ က ပညာတတ် တစ်ဦး ပီပီ ခေါင်းအေးအေး နှင့် ပြန်စဉ်းစားတော့ သည်ပြဿနာ မှာ အလွယ်တကူ ချက်ချင်း လက်ငင်း ဖြေရှင်းလို့ ရသည့် ပြဿနာ မဟုတ်မှန်း သိလိုက်သည် ။ သို့ နှင့် ဇနီး ဖြစ်သူ ကို ခေါ်ကာ လင်မယား နှစ်ယောက် တိုးတိုးတိတ်တိတ် တိုင်ပင်လိုက်ကြသည် ။ လင်းလင်း ၏ အထိန်းတော် ကားဒရိုက်ဘာ ကိုထွန်း ကို လည်း ခေါ်ယူလိုက်ပြီး ဖြစ်ပုံ အကြောင်းစုံကို သေချာမေးသည် ။ နောက်ဆုံး တွင် သည်ကိစ္စ ကို လောလောဆယ် မသိချင်ဟန်ဆောင် နေကြရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသည် ။
( ဆက်လက် ရေးသားပါဦးမည် ။ )
မောင်ပေကတော့ လုပ်ပြီ … ဇာတ်လမ်းတပုဒ်လုံး အကုန်ရေးပြီးမှ အပိုင်းခွဲတင်ပါလား … ပိုဖတ်လို့ကောင်းမှာပဲနော် ။
အင် ဒီတစ်ခါလည်း ဆက်ရန်၇ှိသေးတယ်လား
ကောင်းခန်းရောက်ပြီဆို ဖြတ်လိုက်ပြန်ပြီ ………
ကောင်းခန်းရောက်ရင် မမျှော်ချင်လို. ကိုးရီးယား ကားတောင်မကြည်.ပဲ
ရွာထဲလာပါတယ် မြန်မာကိုးရီးယား ဆရာ ကိုပေနဲ. လာတွေ.နေတယ်
မန်းသားလေးအကြောင်းဆိုတော့ ဦးပေါက်ငယ်စဉ်က ဇာတ်လမ်းများလား…သူပြောတော့ ရန်ကုန်ကို နှစ်ပေါင်း၂၀ကျော်ပြီးမှ တခေါက်ပြန်ရောက်တာတဲ့။ အခုဆို ဦးပေါက်ရဲ့မဒီကြီးက အသက်၆၀ကျော်ရောပေါ့။ wind talker ကတော့ ဖော်ကောင်လုပ်နေပြီ၊ ဦးပေါက်ရေ လွမ်းသေးလားဗျ…..
အဆုံးပိုင်းကို သိချင်နေပြီ အမြန်ရေးပါဗျို့…